မနေ့ညက ရှုံးထွက်ဖလားရလဒ်များ ၊ ကောလဟာလ ရောပြွမ်းနေတဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ အသံတွေနဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
မနေ့ညက ရှုံးထွက်ဖလားရလဒ်များ ၊ ကောလဟာလ ရောပြွမ်းနေတဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ အသံတွေနဲ့ . . . နံနက်ခင်း အားကစား သတင်းများ
ယမန်နေ့ ညက ကစား သွားခဲ့တဲ့ ခါရာဘောင် ဖလား ဆီမီး ဖိုင်နယ် ပထမ အကျော့ မှာတော့ လီဗာပူး နဲ့ အာဆင်နယ် တို့ ဂိုးမရှိ သရေ ရလဒ် ထွက်ပေါ် ခဲ့ ပါတယ် ။
အာဆင်နယ် ဟာ ကွင်းလယ်လူ ရှာကာ ထုတ်ခံ ရမှုကြောင့် မိနစ် ၆၀ ကျော်ကို ၁၀ ယောက်တည်းနဲ့ ကစား ခဲ့ရ ပေမယ့် သရေရလဒ် ထွက်ပေါ်အောင် ကစားသွား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
ပွဲ အပြီးမှာတော့ ရှာကာ ဟာ အာဆင်နယ် ပရိသတ်တွေ နဲ့ အသင်းဖော်တွေကို တောင်းပန် စကားပြောဆို ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
နာမည်ကျော် တင်ဆက် သုံးသပ်သူ ပေါလ်မာဆင် ကတော့ ဆာလာ နဲ့ မာနေး မပါနိုင်တဲ့ လီဗာပူး ရဲ့ အလား အလာ ဟာ စိုးရိမ် စရာ ကောင်းနေ ပါတယ်လို့ မနေ့ညက သရေပွဲ အပြီးမှာ သုံးသပ် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အီတလီ မြေပေါ် မှာတော့ အေစီမီလန် ဟာ ဂျီနိုအာ အသင်းကို အချိန်ပို အထိ ကစားခဲ့ပြီး ၃-၁ နဲ့ အနိုင် ရကာ ကိုပါ အီတလီယာ ဖလား ကွာတားဖိုင်နယ် ကို တက်လှမ်း သွားနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
အခြား ပွဲစဉ် မှာတော့ ဖီအိုရင်တီးနား ဟာ နာပိုလီ ကို အဝေးကွင်းမှာ ၅-၂ နဲ့ အနိုင် ကစားပြီး ကွာတား ဖိုင်နယ် အဆင့်ကို တက်လှမ်း လာခဲ့တယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
ဆော်ဒီ မြေပေါ်မှာ ကစားနေတဲ့ စပိန် စူပါဖလား ရဲ့ ဒုတိယမြောက် ဆီမီး ဖိုင်နယ် မှာတော့ ဘီဘာအို အသင်းဟာ အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် အသင်းကို ၂-၁ နဲ့ အနိုင် ရပြီး ဗိုလ်လုပွဲ ကို တက်ရောက် သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘီဘာအို ဟာ လာမယ့် ၁၆ ရက်နေ့ မှာတော့ ရီးရဲ မက်ဒရစ် အသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင် ဗိုလ်လု ကြရတော့မှာပါ ။
အာဖရိက နိုင်ငံများ ဖလား ပြိုင်ပွဲ မှာတော့ အိမ်ရှင် ကင်မရွန်း အသင်းဟာ အီသီယိုးပီးယား အသင်း ကို ၄-၁ နဲ့ အနိုင် ရရှိပြီး ၂ ပွဲဆက် နိုင်မှု နဲ့ အတူ ရှုံးထွက် အဆင့်ကို တက်လှမ်း သွားနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကင်မရွန်း အတွက် ၂ ဂိုး သွင်းယူခဲ့တဲ့ တိုက်စစ်မှူး အဘူဘာကာ ကတော့ ဒီပြိုင်ပွဲမှာ ၂ ပွဲကစား အပြီး ၄ ဂိုးထိ သွင်းယူ ပေးထားခဲ့ပြီလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
ကျန်ပွဲစဉ် မှာတော့ ဘူကီနာ ဖာဆို က ကိပ်ဗာဒီ အသင်းကို ၁-၀ နဲ့ အနိုင် ရရှိ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အပြောင်း အရွှေ့ သတင်းတွေ မှာတော့ ယူဗင်တပ် ဟာ အာဆင်နယ် က စိတ်ဝင်စား နေတဲ့ အာသာ မယ်လို ကို အပြီးသတ် ဝယ်ယူ နိုင်တဲ့ အသင်းကိုသာ ရောင်းချဖို့ စိတ်ကူးထား တာကြောင့် အငှား ခေါ်ယူလိုတဲ့ အာဆင်နယ် အတွက် အဆင်မပြေ ဖြစ်နေတယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
လက်စတာ စီးတီး နည်းပြ ဘရန်ဒန် ရော်ဂျာ က အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်လူ ယော်ရီ တီလေမန်းစ် ဟာ အသင်း ကနေ ထွက်ခွာ နိုင်တဲ့ အလားအလာ ရှိတယ်လို့ ဖွင့်ဟ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘယ်လ်ဂျီယံ ကွင်းလယ်လူ တီလေမန်းစ် ဟာ အာဆင်နယ် က စိတ်ဝင်စား နေတယ်လို့ သတင်းထွက်နေသူ ဖြစ်ပါတယ် ။
တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး အသင်းသားတွေဟာ ခါရာဘောင် ဖလား ဗိုလ်လုပွဲ ကို မတက်ရောက် နိုင်ခဲ့တဲ့ နောက်မှာတော့ နည်းပြ ကွန်တီ အသင်းကနေ ထွက်ခွာ သွားမှာ ကို စိုးရိမ် ပူပင် နေကြတယ်လို့ သတင်း ထွက်လာခဲ့ ပါတယ် ။
ဗီလာ အသင်းဟာ အဲဗာတန် နောက်ခံလူ လူးကပ်စ်ဒင်း ကို ခေါ်ယူ နိုင်ခဲ့ကြောင်း မနေ့က ကြေညာ သွားခဲ့ပါတယ် ။
ဗီလာ ဟာ စနေနေ့ မှာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နဲ့ ကစားရမှာ ဖြစ်ပြီး ကစားသမားသစ် ကော်တင်ဟို နဲ့ လူးကပ်စ်ဒင်း တို့ ၂ ဦး စလုံး ပါဝင် ကစားပေး နိုင်ဖွယ် ရှိတယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
နယူးကာဆယ် ကလည်း ဘန်လေ တိုက်စစ်မှူး ခရစ်ဝုဒ် ကို ပေါင် ၂၅ သန်း နဲ့ ခေါ်ယူ စာချုပ် လိုက်ပြီ လို့ ကြေညာ သွားခဲ့ ပါတယ် ။
အင်္ဂလန် ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ် ဟာ အိုင်ယာလန် နိုင်ငံ နဲ့ ပူးတွဲပြီး ၂၀၂၈ ယူရို ပြိုင်ပွဲ ကို အိမ်ရှင် အဖြစ် ကျင်းပ ဖို့ အတွက် အဆိုပြုလွှာ ကို တင်သွင်းဖို့ အတွက် အင်္ဂလန် အစိုးရ ထံက နေ ခွင့်ပြုချက် ရရှိဖို့ နီးစပ် နေပြီလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဘရာဇီး နည်းပြ တီတေး ကတော့ ကိုဗစ်ဆေး မထိုးထားသူတွေ ကို ကမ္ဘာ့ဖလား ပြိုင်ပွဲဆီ ခေါ်ဆောင် သွားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဆို ခဲ့ပြီး အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် ကစားသမား ရီနန် လိုဒီ ကိုလည်း ကိုဗစ်ဆေး အပြည့်အ၀ မထိုးထားရ သေးတာကြောင့် ချန်လှပ် ထားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဖွင့်ဟ ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အားကစား ဒါရိုက်တာ အလီမာနီ ကတော့ တောင်ပံ ကစားသမား ဒမ်ဘီလီ ကို အနာဂါတ် ကိစ္စ ၊ စာချုပ်သစ် ကိစ္စတွေ အတွက် လာမယ့် အပတ်ထဲမှာ နောက်ဆုံးထားပြီး အဖြေပေးဖို့ ရက်ချိန်းသတ်မှတ် ပေးလိုက်တယ်လို့လည်း သတင်း ကြားသိရ ပါတယ် ။
PSG နည်းပြ ပိုချက်တီနို ဟာ တိုက်စစ်မှူး မက်ဆီ ကို ကိုဗစ် နလန်ထ အခြေအနေမှာ ထည့်သွင်း မကစားလိုတာကြောင့် ဒီတပတ် ကစားမယ့် ပြင်သစ် လီဂူး ပွဲစဉ် အတွက် လူစာရင်းမှာ ချန်လှပ် ထားခဲ့တယ်လို့ သိရှိရ ပါတယ် ။
Previous Article လီဗာပူး နဲ့ ပွဲမှာ အာဆင်နယ် အသင်းကို တစ်ယောက်လျော့သွားစေတဲ့ ရှာကာ ရဲ့ အနီကဒ် အပေါ် မှတ်ချက် ပေးလိုက်တဲ့ အာတီတာ
Next Article မန်စီးတီး နဲ့ ချဲလ်ဆီး တွေ့ချိန်မှာ လီဗာပူး အခွင့်ရေးယူနိုင်မလား . . . EPL Week ၂၂ အတွက် ခန့်မှန်းချက်များ